PERSONS Archives - Ny Tany Masina Fandalinana any Vietnam
ĐINH BỘ LĨNH (924–979), izay nantsoina voalohany hoe Đinh Hoàn, no amperora vietnamiana voalohany taorian'ny fanafahana ny firenena tamin'ny fanjakan'ny Dynasty Southern Han, ary koa ny mpanorina ny Dynasty Đinh vetivety ary manan-danja olo-malaza amin'ny fametrahana ny fahaleovan-tena vietnamiana sy ny firaisankinan'ny politika tamin'ny taonjato faha-10.
AN DƯƠNG VƯƠNG no mpanjaka ary hany mpitondra ny fanjakan'ny Âu Lạc, firenena taloha iray kilasika izay nifototra tao amin'ny Delta Mena Mena.
Henri MASPERO (1883-1945, 62 taona)
HENRI PAUL GASTON MASPERO dia sinologist frantsay ary mpampianatra izay nandray anjara tamin'ny lohahevitra isan-karazany mifandraika amin'i Azia Atsinanana.
ÂU CƠ dia angano tsy maty vady izay nanambady an'i Lạc Long Quân, ary niteraka atody izay nahatratra zaza zato fantatra amin'ny anarana hoe Bách Việt, razamben'ny vahoaka Vietnamese.
Maurice DURAND (1914-1966, 52 taona)
MAURICE DURAND dia mpandalina ny fiteny frantsay-vietnamiana teraka tany Hanoi.
PIERRE HUARD dia dokotera frantsay (mpandidy sy anatomista), mpahay tantara momba ny fitsaboana sy antropolojika, lava toerana tany Indochina,
Comments Off ao amin'ny Vondron'olona SI LA misy vondrona foko etnik 54 any Vietnam
Comments Off momba ny atrikasa iraisam-pirenena momba ny fampianarana ARETNAMESE sy TAIWANESE FIANARANA 11/2019 (Fizarana 1)
Comments Off amin'ny script HÁN
Fitsidihana anio: 358
Andro farany 7 nitsidika: 2,333
Total visits: 420,584